जब ‘प्रचण्ड–प्रेत’ बौरिन्छ – NamoBuddha Khabar
मंगलबार, पौष २२, २०७६ | १६:३३:४५ |
‘भूतपूर्व’ प्रचण्डलाई बेलाबेला दोहोर्‍याउन मन लाग्ने एउटा रोचक पदावली छ— इतिहासको ‘डिक्टेसन’ । उनलाई लाग्छ, उनी जे–जे गर्दै छन्, त्यो इतिहासको खटन हो । त्यही सोच अनुसार केही समयका लागि, केही स्वार्थलोलुप मानिसका झुन्डहरूका लागि समय आफ्ना जुत्ताको तुनामा बाँधिएर हिँडिरहेको छ जस्तो भ्रम छर्न सफल पनि भएका छन् । उनको जिब्रोमा लगातार दशकौंसम्म उच्चारणको आदत बनिसकेका केही शब्द छन्, केही ‘जार्गन’ छन् ।
राजनीतिक विचारको अन्तिम क्रियाकर्मसमेत सकेर ‘मार्सीवाद’ को विशिष्ट नेपाली मौलिक भाष्यमा भास्सिइसके पनि मार्क्सवादको जपना गरिरहनुपर्ने परिस्थितिको साँघुरो चेपबाट कहिलेकाहीं उनीभित्रको मृत प्रचण्ड जुरुक्क उठ्छ । सचेत लोकलाई थाहा छ, त्यो प्रचण्ड होइन, पुष्पकमल दाहालको जीउमार्फत बौरिएको प्रचण्ड–प्रेत हो । यहाँनेर नबिर्सी भन्नुपर्ने केही टिप्पणी भने छन् ।
कुनै बेला बिनासोचविचार भावुकता र आवेगको शीघ्र अभिव्यक्ति दिने भावुक नेताका रूपमा उनको खुबै टिप्पणी हुन्थ्यो । कतिपय मानिस उनका अभिव्यक्तिलाई मजाकको विषय पनि बनाउँथे । तर त्यति बेलासम्म उनमा विचार र आन्दोलनप्रतिको निष्ठा जिउँदै र गतिशील छ भन्ने प्रतीत हुन छोडेको थिएन ।
पार्टीका वैचारिक एजेन्डालाई समग्र मुलुकको एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न उनको नेतृत्वमा अरू शक्तिसँग भएका रस्साकस्सीले पनि त्यही पुष्टि गरेका हुन् । तर कुन अज्ञात भय, हताशा वा लालचले उनलाई हिजो आफैले ढुलमुले र प्रतिक्रियावादी करार गरेको पार्टीमा विलय हुने प्रस्तावको प्रेरणा दियो ? र, उनी घोषित रूपमै त्यही ढुलमुले र प्रतिक्रियावादी कित्ताको सेवक बन्न दगुरे ? यदि बलियो पार्टी बनाउने उद्देश्य नै थियो भने हिजो छोडेर, फुटेर गएका मित्रहरूलाई डाकेर पार्टी निर्माणको प्रयत्न गर्ने धैर्य किन आएन ?
तेस्रो जनआन्दोलनको आह्वान गर्दै काठमाडौं घेर्ने योजनामा राजधानी सहरकै मध्यम वर्गले साथ नदिएपछि जब उनी काठमाडौंका ‘सुकिला–मुकिला’ अर्थात् उनकै शब्दमा ‘बुर्जुवा रियाक्सनरी’ माथि खनिए, त्यो सहरी मध्यम वर्गबीच आलोचनाको विषय बन्यो । काठमाडौंवासी कतिपय बुद्धिजीवीले आपसमा आफूलाई ‘ओइ सुकिला–मुकिला’ भन्दै सम्बोधन गर्न थाले । त्यसो त मध्यम वर्ग हरेक राजनीतिक क्रान्ति र संघर्षको निर्णायक मानिन्छ, तर सबभन्दा कृतघ्न र अवसरवादी वर्ग पनि यही हो भनिन्छ । ऐनमौकामा यसले दिने र छोड्ने साथले आन्दोलन र क्रान्तिको भविष्य निर्क्योल गर्छन् ।
काठमाडौंको मध्यमवर्गीय चेतना भलै प्रचण्डसँग चिढिएको होस्, तर त्यो बेला उनी सही थिए । कारण, त्यतिन्जेल आफूले बोकेको विचार र हिँडेको बाटोप्रतिको जवाफदेहिता र दायित्वबाट उनी पलायन भइसकेका थिएनन् । अर्थात्, त्यति बेलासम्म ‘प्रचण्ड’ को कुनै अंश उनीभित्र जीवितै थियो ।
जर्ज अर्वेलको प्रसिद्ध उपन्यास ‘एनिमल फार्म’ मा स्किवलर भन्ने पात्र छ, जो ठूलो क्रान्तिपछि निर्मित आदर्श कम्युनको हर्ताकर्ता हो । र, यसैकारण ऊ अधीनस्थ पशुहरूलाई बारम्बार भनिरहन्छ, ‘पशु हो, हामीले भने–भनेको मान । हामीले भने–भनेको गर । नत्र पुरानो मालिक जोन्स फर्केर आउँछ ।’
पुष्पकमल दाहाल पनि बेलाबेला नागार्जुनबासी ज्ञानेन्द्र शाह र उनका अनुचरका नाम लिएर स्किवलरकै लयमा भयको खेती गरिरहन्छन् । जबकि आनुवंशिक सत्ता राजनीतिमा हिजोका राजालाई माथ गर्ने परिवारमोहले उनको निजत्वको आयाम कति संकुचित हुँदै छ, त्यसलाई इमानपूर्वक आत्मसात् गर्ने उदारताको लेश मात्र पनि उनमा छ झैं लाग्दैन ।
पुष्पकमल दाहालको जीउमा प्रचण्ड–प्रेत जुरुक्क बौरिँदो हो र आज पनि उनी बेलाबेला आफ्ना आलोचकलाई ‘बुर्जुवा प्रतिक्रियावादी’ को तीर फ्याँकिरहन्छन् । उनको जिब्रो र ‘सब–कन्सस माइन्ड’ लाई हिजो अभ्यस्त जार्गन र कटाक्षको आदत हटिसकेको छैन । त्यो वाणीमा फुत्तफुत्त निस्कन्छ र निस्केर लोकले सुन्ने बेलासम्म आफैतिर सोझिएर कुरीकुरी गरिदिन्छ ।
पछिल्लोपल्ट उनले भने— मिडिया बुर्जुवाको हातमा छ, सतर्क हुनुपर्छ । यस्तो भन्ने बेलामा उनी बिर्सन्छन् या बुझ पचाउँछन्, सर्पहरूलाई खेद्दाखेद्दै स्वयम् एउटा सर्प बनेको मानिसको किस्साजस्तो आफ्नै सत्य । हिजोको माओवादी केन्द्रको टिठलाग्दो नेकपा–विलोप प्रकरणपछि यो आसेपासे पोषक आर्थिक गुट मात्रै बनेर नवबुर्जुवा वर्गको निर्माण गरिरहेको तथ्य ।
वर्गीय क्रान्तिले उत्पादन गरेका शब्दको उपयोगिता र महत्त्व उत्तर–क्रान्तिकालमा हुँदैन भन्ने होइन, झनै हुन्छ । क्रान्तिपछिको समय प्रतिक्रान्तिको सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिने संवेदनशील काल हो । यो क्रान्तिभन्दा झनै पेचिलो हुन्छ । यति बेला पनि क्रान्ति सतत गति र प्रक्रियामा हुन्छ । त्यो जीवन व्यवहारमा, संस्कृतिमा, आचरणमा लगातार व्यक्त हुन्छ, उत्तिकै इमान र प्रतिबद्धताका साथ ।
यस्तो चरणमा पनि ‘क्लासिकल कम्युनिस्ट जार्गन’ उत्तिकै सुन्दर र वस्तुसंगत सुनिन्छन्, जति क्रान्तिकालमा सुनिन्थे । तर हिजोको क्रान्तिको मूलकर्ता नै जब विकृत पुँजीवादको पुच्छर समातेर माफिया र दलालतन्त्रको वैतरणी तर्न उद्यत हुन्छ, त्यस बेला यी शब्द अर्थहीन र हाँसोलाग्दा सुनिन्छन् ।
माओवादी केन्द्रलाई एमालेमा गाभेपछि एउटै (छाता) कम्युनिस्ट पार्टीको भाष्य बाँड्न खुब रुचि लिन थालेका उनले भनेको ‘ग्रेटर कज’ श्रमजीवी जनताको भविष्यका लागि हो वा आसेपासे, भ्रष्ट, दलाल पुँजीवादको सुरक्षा र संवर्द्धनका लागि, त्यो घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
मेलम्ची परियोजना होस् या मेडिकल शिक्षा सुधार आन्दोलन, उत्पीडित उखुकिसानको आन्दोलन या आफ्नै पार्टीभित्र निर्णायक तहमा महिला नेता स्थापित गर्ने विषय होस् या सभामुख चयनमा देखाइएको वर्तमान उपसभामुखप्रतिको उपेक्षा, पछिल्ला सबै प्रकरणमा उनीभित्रको ‘प्रचण्ड’ मृतवत् भैसकेको देखिन्छ । यतिखेर उनीसँग श्रमजीवी निर्धा–निमुखा, उत्पीडित, उपेक्षितका पक्षमा जुरुक्क ब्युँतिने चमत्कारको कल्पना र आशा कसैले नगरे हुन्छ ।
तैपनि पुष्पकमल दाहालभित्र ‘दफन’ भएको प्रचण्डको प्रेत भने बेलाबेला बौरिन्छ । त्यो प्रेत–बौराइले एकैसाथ निष्पादन गर्ने हास्य, रौद्र र करुण रसले दुनियाँ विरक्त हुँदो छ ।